Dagaal Ka Dhacay Degmada Yaaqshiid Ee Muqdisho. – Calamada.com
Dagaal Ka Dhacay Degmada Yaaqshiid Ee Muqdisho.
calamada September 8, 2018 1 min read
Dagaalkan waxey ciidamada Mujaahidiinta ku qaadeen Fariisin iyo isbaaro maleeshiyaatka Murtadiinta ay ka dhigeen Qeybo ka mid ah Wadada Warshadaha oo ka mid ah wadooyinka ugu waaweyn magaalada Muqdisho.
Dagaalkan waxey ciidamada Mujaahidiinta ugu qaadeen Fariisinka maleeshiyaatka Kooxda Ridada Somalia ay ka sameyteen halka loo yaqaano daaraha Ceymiska ee degmada Yaaqshiid.
Dagaalkan ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan,iyadoo dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay xaafado ka tirsan magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho.
Warar hoose ayaa sheegaya iney jirto khasaara maleeshiyaatka Murtadiinta lagu gaarsiiyay dagaalkan,waxaa xusid mudan fariisinka iyo isbaarada ciidamada Mujaahidiinta ay dagaalka culus ku qaadeen ayaa ah goob maleeshiyaatka Murtadiinta ay si aad ah ugu dhibaateeyaan dadka iyo gaadiidka isticmaala wadada Warshadaha ee Muqdisho.
Dagaalkan ayaa kusoo aadaya xilli ciidamada Mujaahidiinta ee ka howlgala magaalada Muqdisho ay kordhiyeen weerarada ay la beegsanayaan Kufaarta iyo Murtadiinta,iyadoona maalmihii lasoo dhaafay weeraro Mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada Caasimadda ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqden saraakiil iyo askar fara badan oo Kooxda Ridada Somalia ka tirsan.
Previous: Dowladda Itoobiya Oo Xaqiijisay In Isagu Uu Isdilay Injineerkii Dhismaha Biya Xireenka Al Nahda.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo.28-12-1439 Hijri.